कति गाह्रो हुन्छ नारी लाई आमा बन्न यो समाजले बुझेको छ ? – Lekbesi Khabar
कति गाह्रो हुन्छ नारी लाई आमा बन्न यो समाजले बुझेको छ ?
एउटी सासू लाई नाति चाहिन्छ । एउटा पति लाई बच्चा चाहिन्छ । अनि एउटी नारी गर्भवती हुन्छे सबै खुशी पनि हुन्छन् । त्यस पछिका दिन बित्दै जान्छ, समय संगै खुशीको रुप फेरिन्छ ।
हिजो बुहारीले नाति पाउने खुशीमा उज्यालो भएको सासूको अनुहार अधेँरो यस कारणले हुन्छ कि घरको काम बुहारीले कम गर्न थाली भनेर । यो आधुनिक जमानामा हुन्छ सबथोक ? हाम्रा घाँसको भारी बोक्दा बोक्दै जन्मिएका बच्चा हुन्, सासुको झटारो आउन थाल्छ । यता नन्दको अनुहार अधेँरो हुन्छ हिजो पँधेरोबाट भाउजूले बोक्ने गग्री उस्को नाउँमा सर्यो । पतिको अनुहार पनि अधेँरो हुन्छ । हिजोको दिनमा सँधै उज्यालो श्रीमती आजकाल हर बखत थाके जस्तो देखिन्छे। सानो-सानो कुरामा दिक्क मान्न थालेकी छे । उस्को पहिला जस्तो वास्ता गर्न सकेकी छैन । हिजोको दिन उस्को हात शिरानी लगाएर सुत्ने श्रीमती आज कहिले कता कहिले कता फर्किन थालेकी छे ।आजकाल पहिला जस्तो रमाइलो कुरा गर्न खोज्दा झर्को मान्न थालेकी छे । जति बेला पायो उति बेला घिन लाग्ने गरि बान्ता गर्न थालेकी छे । आखिर किन परिवर्तन भै बुझ्न सकेको हुँदैन, सबै थोक त ल्याई देकै छु खान मन लागेको कुरा किन्देकै छु ? श्रीमान सोच्न थाल्छ । घरमा नि सबैले ध्यान देको छन् वास्ता नि गरेकै छु फेरि किन एस्तो ? के एक पटक कसैले सोचेको हुन्छ यति बेला साहनुभुती भन्दा पनि बुझ्ने मान्छेको अवश्यकता हुन्छ भनेर ।
रातभर सुत्न नसकेर यता उता कोल्टे फेर्दै उस्ले बिताएको रात कसले देखेको छ ? देखेको छ त बिहान ढिलो उठेको । उसका शरीर भित्र परिवर्तन भैरहेका हर्मोन र संगैको माहोल कस्ले बुझेको छ ? उसले गरेको बान्ता वाहेक । खाना खान मन नलागेर पनि जबजस्ती बच्चाको लागि खाएको कस्ले देखेको छ ? उसले मुख बिगारेको वाहेक ।
९ महिना तड्पेर, अनिदो रात बिताएर कहिले एक्लै रोएर कहिले हाँसेर कति पटक त्यो बच्चाले पेट भित्र बङ बङ्ती हानेको लाती सहेर, मन लागेको कुरा नखाएर शरीर भरी पीडा हुदा औषधी बिना नै त्यो पीडा सहेर अन्त्यमा मृत्यु संग कयौ घन्टा लडेर त्यो नारीले बच्चा लाई जन्म दिन्छे । बच्चा पाए पछि नर्सले सफा गछिन् र आमा को सामु नि नलगी बाहिर आएर भन्छिन् फलानो कस्को बच्चा हो ? अनि बाबू अगाडि आउँछ र भन्छ मेरो । कति सजिलो हुन्छ एउटा पुरुष लाई बाबू बन्न अनि कति गाह्रो हुन्छ नारी लाई आमा बन्न यो समाजले बुझेको छ ?
ज्ञानु कँडेलको फेसबुक वालबाट साभार गरिएको ।
१९ पुष २०७५, बिहीबार ०९:५९ January 3, 2019